lundi, 04 février 2019 21:43
Faritra ambony Antananarivo: Vatobe enina ahiana hianjera
Noho ny fianjeran’ny vatobe izay nitranga teny Ampamarinana omaly, izay nahafatesana olona 4 sy naharatrana olona miisa11 dia nandray ny andraikiny ny ao anivon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA).
Nanao rodobe nijery ifotony teny an-toerana ny zava-nitranga ny delegasiona, notarihan’ny Delege ny boriboritany faha efatra, ny sampana GRC (Gestion des risques et catastrophes) ao anivon’ny CUA, ny mpamonjy voina ary ny DAJ (Direction des affaires juridiques et contencieux), niampy ny Fokontany teny an-toerana no nanatanteraka izany.
lundi, 04 février 2019 21:40
Morondava: Ravan'ny Polisy ny tambazotra iray mpanao fanafihana mitam-basy
Olona efatra iray tarika tamin'i Tody, ilay jiolahy raindahiny lavon'ny Polisy omaly, no voasambotra androany.
Jiolahy mpiara-manatanteraka fanafihana tamin'i Tody ny iray, mpimasin'izy ireo ny iray ary ny mpandray entana halatra.
Lasibatr'izy ireo ny Faritra Menabe sy Melaky. Mbola misy naman'izy ireo karohina.
lundi, 04 février 2019 18:33
Ambatoboeny: Le cuisinier des kidnappeurs de Housna pris par les gendarmes
Les Gendarmes n'ont pas attendu longtemps, après la libération de Housna Ramjanaly, operateur à Ankijabe, District Ambatoboeny, attaqué par 40 bandits dans leur maison, la nuit du jeudi 31 janvier, lequel son mari a été gravement blessé à la tête par un coup de hache, des éléments armés ont poursuivi toute la nuit d'hier ces bandits et kidnappeurs.
Les Gendarmes ont pu capturer 5 bandits, dont le cuisinier du groupe des malfaiteurs.
Les prisonniers ont été ramenés à Marovoay hier, avant d'être transférés ce jour au Brigade de la Gendarmerie Ambatoboeny.
lundi, 04 février 2019 16:36
Emiliano Sala: Hita ao ambany ranomasina ny fiaramanidina nitondra azy
Nanao fanambarana ny fitondrana Britanika fa hita ao amin'ny faridranomasin'ny nosy kely Guernesey ny fiaramanidina nitondra ity mpilalao baolina kitran'ny Nantes ity, izay amonjy ny kilioba vaovao naka azy.
Misy vatana mangatsiaka iray no tazana ao anaty fiaramanidina, ao ambany ranomasina, fa mbola tsy fantatra na ny an'i Sala na an'ilay mpanamory ny fiaramanidina.
Raha tsiahivina moa dia ny alin'ny alatsinaina 21 janoary hifoha ny talata, dia tsy hitan'ny radar intsony ny fiaramanidina nitondra an'ity mpilalao baolina kitra malaza Argentin, Emiliano Sala, ao amin'ny FC Nantes ity.
Niala tao Nantes France izy hiazo an'i Cardiff no izao tra-doza nidoboka an-dranomasina Guernesey-Aurigny, tao amin'ny nosy anglo-normandes, teo amin'ny 8ora alina, izay tokony higadona tao Pays de Galles tamin'ny 9 ora alina.
lundi, 04 février 2019 16:27
Ministeran’ny serasera sy kolontsaina: NAOTY mahabe resaka
Namoaka naoty ny Talen’ny kabineratra, ny 30 janoary 2019, mibaiko ny famerenana ireo « véhicules administratifs » rehetra. Miteraka resabe eo anivon’ny ministera io taratasy io, satria hatreto tsy mbola misy didim-panjakana manala amin’ny toerany ireo Tale isan-tokony eo anivon’ny ministera roa nakambana ho iray, dia ny serasera sy ny kolontsaina, ary tsy mbola nisy ihany koa didim-panjakana manendry tale vaovao, izay mampiasa ireny fiaram-panjakana ireny.
Manao fanamarihana ihany koa ny mpiasa eo anivon’ity ministera ity sao fifanitsaham-pahefana mamofompofona fanamparam-pahefana izao, satria hatramin’izay hoy ny mpiasa dia andraikitry ny Sekretera jeneralin’ny ministera ny momba ny fitantanan-draharaha (administration), fa tsy anjaran'ny Talen’ny kabinetra. Ny Talen’ny kabinetra hoy hatrany ny mpiasa dia tokony hisahana ny politika fotsiny ihany.
Betsaka no mimonomonona manoloana izany.
lundi, 04 février 2019 16:05
CENI: Nahavita trano hiasan’ireo rantsamangaikany aty Ambatondrazaka
Tonga nitokana azy taty an-toerana ny sabotsy 02 febroary teo ny mpikambana maro eo anivon'ny Vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana (CENI), notarihan-dRakotomanana Yves Herinirina, filohany.
Trano lehibe ahitana efitra enina ity, ho fiasanan’ireo rantsamangaikan’ny CENI dia ny Commission électorale de district (CED) sy ny Commission Electorale Régionale (CER) ary ny Centre Informatique Régional (CIR).
Mitentimbidy 200 tapitrisa Ariary ny foto-drafitrasa, izay io no voalohany vitan’ny CENI hatramin’izay nijoroany izay.
lundi, 04 février 2019 15:59
Finoana Katôlika: Mompera 2 sy Diakra 6 nohamasina teto Toamasima
Nitombo isa ny mpanompon’Andriamanitra manatevina ny fikambanana masina Oblats de Marie-Immaculée (OMI). Nitarika ny fanamasinana sy velirano nataon’izy ireo tao amin’ny EKAR Notre Dame de Lourdes eo Anjoma, omaly alahady 3 febroary ny Kardinaly Tsarahazana Désiré.
Nalaza fa nikasa ny hanotrona ity fotoana ity ny filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina saingy nofoanana tamin’ny ora farany indray ny diany ho aty Toamasina.